Asian nkwenye bụ a foundational echiche ya-ụfọdụ na-ekwu a nso ibu (Emanuel, Wendler, and Grady 2000; Manson and O'Neill 2007) -in research ụkpụrụ ọma. Mfe version nke nnyocha ụkpụrụ ọma ekwu, sị: "ụbụrụ bụ n'ihi na ihe niile." Nke a dị mfe na-achị, Otú ọ dị, adịghị agbanwe agbanwe na ẹdude usoro ziri ezi ụkpụrụ, ụkpụrụ iwu, ma ọ research omume. Kama nke ahụ, na-eme nnyocha kwesịrị, nwere ike, na-eme eso a ihe mgbagwoju emi: "ụdị ụfọdụ nke nkwenye n'ihi na ọtụtụ nnyocha."
Mbụ, iji akpali n'ofè gabiga ókè simplistic echiche banyere ụbụrụ bụ, Achọrọ m ịgwa gị banyere ubi nwere na-amụ ịkpa ókè (a kpuchie a bit n'Isi nke 4 nakwa). Nihe omumu a, adịgboroja achọ ịbata nwere dị iche iche e ji mara-dị ka a nwoke ma ọ bụ nwanyị-etinye maka dị iche iche ọrụ. Ọ bụrụ na otu ụdị ocho oru ego n'anya goro na a elu ọnụego, mgbe ahụ, ndị nnyocha pụrụ ikwubi na e nwere ike ịbụ ịkpa ókè na igo usoro. Maka nzube nke isiokwu a, ihe kacha mkpa banyere ndị a nwere bụ na ndị sonyere na ndị a nwere-na-ewe mmadụ n'ọrụ-dịghị mgbe ha weta nkwenye. N'ezie, ndị a sonyere uchu na-eduhie ndị adịgboroja ngwa. Ma, ubi nwere na-amụ ịkpa ókè e rụrụ ke dịkarịa ala 117 ọmụmụ na 17 mba (Riach and Rich 2002; Rich 2014) .
Researchers na-eji ubi nwere na-amụ ịkpa ókè kwuru na ọ bụ anọ na atụmatụ nke ndị a ọmụmụ na, na-eme, mee ka ha ethically ime: 1) ole na mbibi ọ na-ewe mmadụ n'ọrụ, 2) oké elekọta mmadụ uru nke inwe a pụrụ ịdabere na ọtụtụ nke ịkpa ókè, 3) adịghị ike nke ụzọ ndị ọzọ nke ji atụ ịkpa ókè, na 4) eziokwu ahụ bụ na aghụghọ adịghị ike emerụ norms nke na ọnọdụ (Riach and Rich 2004) . Onye ọ bụla n'ime ọnọdụ ndị a bụ oké egwu, na nwere ihe ọ bụla n'ime ha ejughị afọ, ndị usoro ziri ezi ikpe ga-abụ ihe ịma aka. Atọ n'ime ihe ndị a nwere ike ewepụtara usoro ziri ezi ụkpụrụ na Belmont Report: mmachi nsogbu (Ùgwù Persons na Beneficence) na nnukwu uru na adịghị ike nke ndị ọzọ ụzọ (Beneficence na Justice). The ikpeazụ feature, na-abụghị mebiri nke Contextual norms, ike ga-ewepụtara na Menlo Report si Ùgwù Iwu na Public Interest. Yabụ, ọrụ ngwa ndị a ọnọdụ ebe e nwere ugbua ụfọdụ anya ike nke na o kwere omume aghụghọ. N'ihi ya, ndị a nwere adịghị mmebi ihe ugbua pristine usoro ziri ezi odida obodo.
Tụkwasị na nke a ụkpụrụ ndị dabeere na esemokwu, ọtụtụ IRBs na-ahụ kwubiri na enweghị nkwenye nihe omumu a bụ agbanwe agbanwe na ẹdude iwu, akpan akpan Common Ọma ahụ §46.116, akụkụ (d). N'ikpeazụ, US ụlọikpe kpebisịrị ikpe na-akwado na enweghị nkwenye na aghụghọ na ubi nwere tụọ ịkpa ókè (Ee e 81-3029. United States Ụlọikpe Mkpegharị, Seventh Circuit). N'ihi ya, na ojiji nke ubi nwere na-enweghị nkwenye bụ agbanwe agbanwe na ẹdude usoro ziri ezi ụkpụrụ na ẹdude iwu (dịkarịa ala iwu na US). Nke a echiche e akwado site na sara mbara ọha research obodo, ọtụtụ ndị IRBs, na site US Ụlọikpe Mkpegharị. N'ihi ya, anyị ga-ajụ ndị dị mfe na-achị "ụbụrụ bụ n'ihi na ihe niile." Nke a abụghị a na-achị na-eme nnyocha na-eso, ọ dịghịkwa a na-achị na-eme nnyocha kwesịrị iso.
Akpụ akpụ ihe karịrị 'nke ụbụrụ bụ n'ihi na ihe niile "doo eme nnyocha na a ike ajụjụ: ihe iche nke nkwenye na-mkpa maka ihe di iche iche nke research? O kwesịrị ịdị, e adịwo ukwuu tupu arụmụka gburugburu ajụjụ a, ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ọ bụ na onodu nke nchọpụta ọgwụ na ahụ na analọg afọ. Ibio ibio na arụmụka, Eyal (2012) dere, sị:
Otu ihe dị mkpa nghọta site na nke a tupu arụmụka bụ na ụbụrụ bụ bụghị ihe niile ma ọ bụ ihe ọ bụla; e nwere ike na-adịghị ike karị iche nke nkwenye. Mgbe ụfọdụ, siri ike ụbụrụ bụ yiri na ọ dị mkpa, ma, ndị ọzọ ọnọdụ, adịghị ike karị iche nke nkwenye nwere ike ịbụ ihe kwesịrị ekwesị. Next, Aga m na-akọwa atọ ọnọdụ ebe na-eme nnyocha ga-agbasi mbọ ike iji nweta ụbụrụ bụ site nile otụk ọzọ na a ole na ole nhọrọ n'ọnọdụ ndị ahụ.
Mbụ, mgbe ụfọdụ, na-arịọ sonyere inye ụbụrụ bụ nwere ike dịkwuo ize ndụ nke na ha na-enwe. Dị ka ihe atụ, na encore, na-arịọ ndị mmadụ bi n'okpuru repressive ọchịchị ka ha weta nkwenye ka ha na kọmputa na-eji maka na-amata ọtụtụ Internet nnyocha nwere ike idowe ndị na-ekweta n'ihe ize ndụ. Mgbe enyere nkwenye na-eduga ná ize ndụ dị elu, na-eme nnyocha pụrụ ịhụ na ihe ọmụma banyere ihe ha na-eme bụ ọha nakwa na ọ bụ mee ka sonyere na-apụ na. Ọzọkwa, ha nwere ike na-achọ nkwenye n'aka iche iche na-anọchi anya ndị sonyere (eg, NGO).
Nke abụọ, mgbe ụfọdụ inwe n'ụzọ zuru ezu ụbụrụ bụ tupu ọmụmụ amalite nwere ike imebi nkà mmụta sayensị uru nke ọmụmụ. Dị ka ihe atụ, na mmetụta uche Contagion, ma ọ bụrụ na sonyere maara na-eme nnyocha na-eme nnwale banyere mmetụta uche, na nke a nwere ike gbanwere àgwà ha. Ikayakke ọmụma si sonyere, na ọbụna aghọgbu ha, bụghị ihe ọhụrụ na-elekọta mmadụ research, karịsịa na lab nwere na akparamaagwa. Ọ bụrụ na ụbụrụ bụ bụ ekwe omume tupu a na-amụ na-amalite, na-eme nnyocha nwere ike (na-emekarị) debrief sonyere mgbe ọmụmụ bụ n'elu. Debriefing n'ozuzu na-agụnye akọwa ihe n'ezie mere, remediating ọ bụla Harms, na inweta nkwenye mgbe nke bu eziokwu. E nwere ụfọdụ arụmụka, Otú ọ dị, banyere ma debriefing na ubi nwere kwesịrị ekwesị, ma ọ bụrụ na debriefing onwe ya pụrụ imerụ sonyere (Finn and Jakobsson 2007) .
Nke atọ, mgbe ụfọdụ na ọ bụ logistically impractical na-enweta ụbụrụ bụ onye ọ bụla impacted site n'ọmụmụ ihe gị. Dị ka ihe atụ, were ya a na-eme nchọpụta nke chọrọ amụ Bitcoin blockchain (Bitcoin bụ a kaadị-ego na blockchain bụ ihe ndekọ nke ihe nile Bitcoin azụmahịa (Narayanan et al. 2016) ). Ụfọdụ ndị na-eji Bitcoin na-atụ anya na-achọ anonymity, na ụfọdụ ndị òtù nke Bitcoin obodo nwere ike ikwe ka e ụdị nnyocha na ha obodo. O di nwute na, ọ gaghị ekwe omume nweta nkwenye n'aka onye ọ bụla nke na-eji Bitcoin n'ihi na ọtụtụ n'ime ndị a ndị mmadụ na-amaghị aha. Na nke a, ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịgbalị ịgwa a sample nke Bitcoin ọrụ ka ha ụbụrụ bụ.
Ndị a atọ mere na-eme nnyocha nwere ike ọ gaghị enwe ike inweta ụbụrụ bụ-amụba ize ndụ, o megideghị research ihe mgbaru ọsọ, na logistical-agaghị emeli-abụghị nanị ihe mere na-eme nnyocha ọgụ na mgba iji nweta ụbụrụ bụ. Na, na-agbanwe agbanwe na m na-atụ aro-agwa ọha na eze banyere gị nnyocha, na-eme ihe nwepu aha, na-achọ nkwenye n'aka atọ-ọzọ, debriefing, na-achọ nkwenye n'aka sample nke ndị keere òkè-agaghị ekwe omume mgbe nile. Ọzọkwa, ọ bụrụgodị na ndị a uzo ozo kwere omume, ha nwere ike ghara-eju gị ọmụmụ. Ihe atụ ndị a na-eme show Otú ọ dị, na ụbụrụ bụ bụghị ihe niile ma ọ bụ ihe ọ bụla, ma na ihe ngwọta nwere ike melite usoro ziri ezi itule nke ọmụmụ na-apụghị inweta zuru ụbụrụ bụ site nile impacted na ndị ọzọ.
Ikwubi, kama "ụbụrụ bụ n'ihi na ihe niile" na-eme nnyocha kwesịrị, nwere ike, na-eme eso a ihe mgbagwoju emi: "ụdị ụfọdụ nke nkwenye n'ihi na ọtụtụ ihe." Nke E na okwu nke ụkpụrụ, ụbụrụ bụ nweghịkwa dị mkpa ma ọ bụ zuru ezu maka ụkpụrụ Nkwanye Ùgwù maka Persons [ Humphreys (2015) ; p. 102]. Ọzọkwa, Nkwanye Ùgwù maka Persons bụ nanị otu n'ime ụkpụrụ na kwesịrị na-enweta nkwado mgbe atụle research ụkpụrụ ọma; ọ na-ekwesịghị na-akpaghị aka na-anyịgbu Beneficence, Justice, na nrubeisi nye iwu na Public Interest, a isi ihe e mere ugboro ugboro site ethicists na n'oge gara aga 40 afọ [ Gillon (2015) ; p. 112-113]. Gosipụtara na okwu nke usoro ziri ezi frameworks, ụbụrụ bụ n'ihi na ihe niile bụ ihe gabiga ókè deontological ọnọdụ na dara aja na ọnọdụ ndị dị otú ahụ dị ka Timebomb (lee mpaghara 6.5).